Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် တရားဝင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ၀၈၃၀ နာရီတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကျောက်တိုင်သို့ သွားရောက်၍ ဂုဏ်ပြုပန်းခွေချခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင့်ခမည်းတော် Norodom Sihanouk ၏ အထိမ်းအမှတ်ရုပ်ထုသို့ ဆက်လက်သွားရောက်ကာ လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး Peace Palace တွင် ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Samdech HUN SEN ၏ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်တို့ ဦးဆောင်သော နှစ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များသည် မြန်မာ - ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်နယ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ သောင်း ပေးအပ်လှူဒါန်းမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်အား နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ သွားရောက်၍ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ H.E. Mr. Samdech HENG SAMRIN နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော်များအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဆွေနွေးခဲ့ပါသည်။